The Myawady Daily: ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှအကောင်းဆုံးနှင့် ပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှအကောင်းဆုံးနှင့် ပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံ
အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှ အကောင်းဆုံးနှင့် ပြဿနာအနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော်လည်း တစ်ချို့အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် မီဒီယာများ၏ ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ ရှိခြင်းကြောင့် အစိုးရနှင့်တပ်မတော် အပေါ်နိုင်ငံတကာမှ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ရှိကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး နှင့်အတူ သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူ များတက်ရောက် ကြသည်။
ဦးစွာဧည့်သည်တော် သံအမတ်ကြီးက မြန်မာ-ဂျာမနီ နှစ်နိုင်ငံသည် ဆက်ဆံရေးရှည်လျားခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းရှိပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် နိုင်ရေးအတွက် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့်ကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကောင်းမွန် သည့်အခြေအနေ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လျှောက်လှမ်းနေမှုတွင် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အရေးကြီးသည်ကို သိရှိပါကြောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ကိုလည်း ဂျာမနီနိုင်ငံမှ တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်း အောင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် မီဒီယာများ၏ မဟုတ်မမှန်ချဲ့ကားပြောဆို နေသည်များကိုလည်း သိရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်၍ နိုင်ငံတစ်ချို့၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လွဲမှားစွာထင်မြင် နေမှုများအား အခြေအနေ မှန်သိရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ဆက်သွားမည့် လမ်းကြောင်းတွင် အခက်အခဲများ လည်းရှိနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြောကြားရာတွင် တပ်မတော်အပေါ် ပြည်သူလူထု၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ အထင်အမြင်လွဲမှားမှု မရှိစေရေး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ရန် အဓိကဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် လျှောက်လှမ်း နေမှုခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်စေရန်နှင့် အဖက်ဖက်မှကောင်းမွန် တိုးတက်အောင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီး တပ်မတော် အနေဖြင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက် နေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှ အကောင်းဆုံးနှင့် ပြဿနာအနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော်လည်း တစ်ချို့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများမှ ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ ရှိခြင်းကြောင့် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အပေါ်နိုင်ငံတကာမှ အထင်အမြင်လွဲမှားမှု များရှိကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရာတွင်တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံမတူညီနိုင်သော်လည်း တပ်မတော်အနေဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် နေကြောင်း၊ မိမိဂျာမနီနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်စဉ် ဂျာမနီစစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတို့နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ဒေသခံပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ချို့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူ လိုသော်လည်း လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် အားစွန့်လွှတ်လိုခြင်း မရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတွင် တပ်မတော်တစ်ရပ်တည်း သာရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာ-ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများ နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Posted by myawady at 7:54 PM